Tsananguro Moto mahabhu anonyanya kugadzirwa nemhangura chiwanikwa. Zvimwe zvinhu zvakagadzirwa nemapurasitiki uye zvinhu zvenaironi. Inowanzo shandiswa pamwe chete nedombo remoto kuti riite chinzvimbo chemvura. Iyo kamwene ine mabasa maviri: Jet uye kumwaya. Paunenge uchishandisa, ingo shandura iyo kamwene musoro sekudikanwa. Makiyi Anokosha: ● Chinyorwa: Brass uye plactic ● Saizi: 19mm / 25mm ● Kushanda kumanikidza: 6-10bar ● Bvunzo yekumanikidza: 12bar ● Mugadziri uye anozivikanwa kune BSI Ekugadzirisa Matanho: Dhirowa-Mould -Hose kudhirowa -Assem ...
Jet pfapfaidza kamwene ine vharuvhu yekudzora
Tsananguro: Jet pfapfaidzo kamwene nevhavha yekudzora ibhuku remhando yemhando. Iyi mabuhu inowanikwa nealuminium kana yePurasitiki uye inogadzirwa kutevedzera BS 5041 Chikamu 1 chiyero neyakaendeswa hosi yekubatanidza inoenderana BS 336: 2010 standard. Iyo mabuji akaiswa pasi pesimba rekumanikidza uye anokodzera kushandiswa pane yezita rekuti inlet kumanikidza kusvika gumi nembiri mabara. Yemukati kukanda magumo emhando yega yega inoenderana nemhando yepamusoro kuyedza yakaderera kuyerera kurambidzwa inosangana neyakajairwa mvura kuyerera te ...
BS336 single adapta
Tsananguro: Imwe adapta ndeye yemhando mhando adapter. Aya maadapter anogadzirwa nendarira nealuminium inogadzirwa kutevedzera BS 336: 2010 standard. Iwo maadapter anoverengerwa pasi pesimba rekumanikidza uye anokodzera kushandiswa pane zita rekupinza inlet kumanikidza kusvika gumi nembiri mabara. Kukanda kwemukati kunogadziriswa kwema adapta ese emhando yepamusoro kuverengera kudzika kwekudzivirira kunosangana neyakajairwa mvura kuyerera bvunzo inodiwa.Iyo inowanzo shandiswa pamwe neyemoto yemvura, iyo inogona kutevedzera chimiro che ...
Storz Hose kubatanidza
Tsananguro: Storz hosi yekubatanidza inoshandiswa kumvura yegungwa kurwa munzvimbo yemvura-yekupa nzvimbo mukati mechikepe. Seti yekubatanidza hose yakakamurwa kuita zvikamu zviviri. vhura vharuvhu uye utamisire mvura kumubhedha kuti udzime moto. Zvese zveGerman STORZ coupling zvakagadzirwa, zvine kutaridzika kutaridzika uye yakasimba tensile simba. Mukugadzirwa kwekuita, isu tinoteedzera nemazvo marine zviyero zvekugadzirisa uye testin ...